Malunga nathi -IJinan Power Rubber roller Equipment Co., Ltd.
Isizukulwane sethu esitsha sezixhobo zerabha esibonelela ngeqonga elifanelekileyo lokwenza imveliso ekrelekrele. Unxibelelwano phakathi kwabaphathi bemveliso kunye nabaqhubi beentsimi, ukwabelana ngedatha, ukurekhoda kunye nokuhlola kunokufezekiswa ngeqonga lokusebenza kwezixhobo, ukudala iimeko ezilungileyo kulawulo ezahlukeneyo kwimveliso.
Inkampani yethu ibonelela abavelisi beerabha zerabha ngezixhobo ezichanekileyo, ezizinzileyo kunye nemveliso. Iimveliso zethu eziphambili kubandakanya: Umatshini wokurola irabha, Umatshini wokugaya / wokugaya we-CNC, Isinyithi se-Cylindrical, Umatshini wokugubungela irabha, Umatshini wokurola irabha, Isixhobo sokulinganisa ngobuchule, njl.
Ngo-2000, iimveliso zethu zaluphumelela uhlolo lweZiko lokuQinisekiswa koMgangatho weCCIB ngokungqinelana nemigangatho ye-ISO 9001. Ngokusebenzisa izixhobo zethu, uya kwandisa ukusebenza ngokufanelekileyo, kwaye uphakamise umgangatho wemveliso. Kananjalo inokuzisa izibonelelo zoqoqosho ezininzi.